Mogadishu Journal » 2013 » January » 3
//January 3, 2013
Waxgaradka Hiiraan Oo Maanta Maamulka Isbitaalka Beledweyn Ku Wareejiyey Dhaqaalle Ay Iska Soo Ururiyeen.
(mjournal):Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa maanta maamulka Isbitaalka magaalada Beledweyn ku wareejiyey deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen Odayaasha iyo Waxgaradka. Deeq lacageed oo ah mid ay waxgaradka gobolka Hiiraan iska soo ururiyeen ayaa waxey ugu talagaleen iney ku...
Wasiirka Maaliyadda Oo Ka Hadlay Lacag Shilin Soomaali Ah Oo Lagu Daabacayo Sudan.
(mjournal):Wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Xasan Saleebaan ayaa ka hadlay lacag shilin Soomaali ah oo in muddo ah ay daabacaaddeedu ka socotay magaalada Khartoum ee caasimaadda dalka Sudan. Maxamuud ayaa sheegay in daabacaadda...
Fowsiya Yuusuf Oo Lagu Wado Inay Maanta La Kulanto William Hague.
(mjournal):Raysul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo booqasho ku joogta dalka Britain ayaa lagu wadaa inay maanta la kulanto William Hague oo ah xog-hayaha arrimaha dibadda ee Britain. Labada mas’uul ayaa la...
Hay’adaha Samafalka Oo Laga Codsaday Inay Dib Uga Howlgalaan Gobolka Hiiraa
(mjournal):Hay’adaha samafalka ayaa laga codsaday inay dib uga howlgalaan gobolka bartamaha Soomaaliya ee Hiiraan si loo caawiyo dadka deegaanka. Iyagoo ka hadlayay magaalada Beledweyne, odayaasha deegaanka iyo saraakiil ka tirsan Midowga Afrika oo ku sugan gobolka waxay ka...
Madaxweynaha Bartamaha Afrika Oo Sheegay Inuu Xilka Ka Degi Doono.
(mjournal):Madaxweynaha wadanka Bartamaha Afrika (Central African Republic)Francois Bozize ayaa sheegay inuu xilka ka degi doono marka wakhtigiisa dhamaado sanadka 2016. Madaxweynaha ayaa sidoo kale casilay Wiilkiisa oo uu horey uga dhigay Wasiirka Difaaca iyo waliba Taliyaha...
2 Kamid Ah Shaqaalaha UN-ka Oo La Sii Daayey Kadib 136 Maalmood Oo Afduub Loo Heystay.
(mjournal):Laba nin oo u dhashay dalka Urdun (Jordan) oo kamid ahaa hawlwadeenada Qaramada Midoobay ee ku sugan gobalka Darfur ee dalka Sudan, ayaa laga siidaayey kooxdii afduubka ku heysatay muddo 136 maalmood ah. Hassan Mazawdeh iyo Qasem Sarhan oo laga afduubay Darfur ayaa...
Maraykanka Oo Dilay Mid Kamid Ah Hogaamiyaasha Qabaa’ilka Pakistan.
(mjournal):Diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Daroonka (Drone) ee Maraykanka ayaa duqeeyey gaariga uu leeyahay mid kamid ah hogaamiyaasha beelaha Wasiristaan kana mid ah hogaanka Talibanka Pakistaan, weerarkan ayaa ka dhacay waqooyiga gobalka Wasiristaan ee dalkaasi Pakistaan....
Wasaaradda Gaashaandhiga Oo Faahfaahin Ka Bixisay Howlgalada Ciidamada Ee Ka Socda Gobolada Dalka.
(mjournal):Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa faah faahinka bixisay, istaraatiijiyadda ciidammada iyo howlgalada ka socda gobolada, Iyadoo baaq u dirtay ciidammada Qalabka Sida iyo shacabiga Soomaaliyeed, Wasiirka Gaashaandhigga oo ay wehliyaan...
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Oo La Kulmay Jaaliyadda Soomaalida Ee Sudan.
(mjournal):Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay magaaladda Khartoum kula kulmay Jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Sudan. Madaxweynaha oo la hadlayay ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa uga mahadceliyay dowladda...
Magaalada Muqdisho oo ay ku soo badanayaan, dadka dhaqan xumada, iyo anshax la’aanta dibada kala yimid.
Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa iney ku soo badanayaan waxyaabo ka soo horjeeda diinta dhaqankii, iyo hidahii suubanaa ee lagu yaqaaney guud ahaan deegaanada Banaadir. Waxaa baryahan dambe aad ugu soo badanaya magaaladaas, waxyaabo aan horey looga baran...